Maqaallada ku saabsan Argentina
Shaqada iyo Shaqada ee Argentina.
November 24, 2020 Antika Kumari Argentina, shaqo
Maalmahan, waxay umuuqataa inay kordhayaan shaqooyinka caadiga ah ama qadka tooska ah halkii aad boos buuxa kaheli laheyd. Si kastaba ha noqotee, helitaanka shaqo iyo shaqo ee Argentina sidii hore waa caqabadda ugu weyn ee hortaagan maxaa yeelay waxay leedahay sharciyo adag oo shaqo iyo kuwo sare
Fiisaha Argentina ee Hindida
October 30, 2020 Shubham Sharma Argentina, fiisada
Si loo galo Argentina, dadka Hindida ah ee haysta baasaboorada caadiga ah waxay u baahan yihiin fiisooyin. Codsi kasta oo fiiso dalxiis ama fiiso ganacsi si aad ugu duusho Argentina waa in loo diraa safaaradda Jamhuuriyadda Argentina ee New Delhi, India. Hindida ku nool
Noocyada fiisaha fiisada ee Argentina
September 22, 2020 Maitri Jha Argentina, fiisada
Argentina waa wadanka ugu koonfurta koonfurta America. Waa mid ka mid ah waddamada ugu waaweyn adduunka, oo ku fadhiya in ka badan hal milyan oo mayl laba jibaaran. Waa inaad dalbataa fiiso aad ku booqato Argentina - inaad ka timid mooyee
Sidee Loo Dalbadaa Magangalyada Argentina?
Waxaa laga yaabaa 13, 2020 Antika Kumari Argentina, qaxootiga
Qaxootiga ku sugan Arjantiin Kuwaasi waa dadka lagu qasbay inay ka baxaan dalkooda ama guryahooda: Cabsi laga qabo in lagu silciyo fikradooda siyaasadeed, caqiidadooda, qowmiyaddooda; Ama sababtoo ah noloshooda, ilaalintooda, ama xorriyaddooda waxay halis ugu jiraan nidaam ahaan